Jabhadda ONLF iyo Urur Siyaasadeedka SCF oo u muuqda kuwa isku laba dublayn ayaa kulan ku yeeshay magaalada Diri-dhaba. – Xeernews24
Jabhadda ONLF iyo Urur Siyaasadeedka SCF oo u muuqda kuwa isku laba dublayn ayaa kulan ku yeeshay magaalada Diri-dhaba.
1. Januar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Waxaa maalmahan magaalada Diridhaba ee Gobolka Sitti kusugnaa wafti balaadhan oo ka socday Isbahaysiga Soomaaliyeed ee Xoriyada (SCF).
Waftiga oo isugu jiray labada urur ee Isbahaysiga ah ee JWXO iyo SARDA ayaa si wayn loogu soo dhaweeyay magaalada Diridhaba halkaas oo dadwayne aad u tiro badan ay soo dhawaynta waftiga isugu soobaxeen.
Waftigan oo ku guda jira kormeerkii Gobalka SITTI oo maanta la kulmay qaar ka mid Haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Diridhaba.
Kormeerkan oo waftigu uu ku soo kala bixin doono dhamaan Gobolka Sitti ayaa lagu wadaa in shacabka ku dhaqan Sitti la gaadhsiiyo fariinta dhabta ah ee Isbahaysiga iyo mustaqbalka siyaasadeedka shacabka Soomaalida galbeed guud ahaan.
Shacabka reer Sitti ee soo dhawaynta iyo Soomaalinimada dhabta ah loogu yimaad waxay il gaar ah kula socdaan is rog-roga iyo laba dublaynta jabhada ONLF taas uu muuqadata mid ka caga jiidaysay heshiiskii ahaa in Srda iyo ONLF siyaasad ahaan ku midoobaan ururka SCF taas oo ilaa maanta ka muuqan hab dhaqanka siyaasadeed ee ONLF.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/diri.jpg 720 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-01 16:55:172019-01-01 16:55:17Jabhadda ONLF iyo Urur Siyaasadeedka SCF oo u muuqda kuwa isku laba dublayn ayaa kulan ku yeeshay magaalada Diri-dhaba.
Dhegeysi wacan Bal adba dhan u Af garo reer ONLF. Sawirro: Madaafiic hoobiyeyaal oo ku dhacay Xarunta Qaramada Midoobey ee Xa...